Amathayili welanga wokuthwebula amandla nokuwabelana kabusha emakhaya ethu - e-Afrikhepri Fondation
ngoLwesine, meyi 6, 2021
Amathayili welanga wokuthwebula amandla nokuwabelana kabusha emakhaya ethu
Funda: 2 amaminithi
Theinkampani iSolTech Energy isungule isixazululo sokuqala sokubamba nokusebenzisa ukushisa kwelanga. Ngamafu noma ngaphandle kwawo. Kunezindlela ezimbili eziyinhloko zokusebenzisa amandla elanga: Eyokuqala i-photovoltaics, equkethe ukuguqula imisebe iqonde ngqo kumandla kagesi. Okwesibili ukushisa: ukusebenzisa ilanga ukufudumeza umoya ozungezile, noma ukukhiqiza umusi ngakhoke ugesi.
Amathayili akhiqizwe yiSolTech asobala. Ngenkathi kuvalwa isakhiwo, bawela ngemisebe yelanga, okushisa kwayo kubanjwa ngengubo ebekwa ngaphansi kwamathayili. Uhlelo lobunikazi lusabalalisa la mandla okushisa kulo lonke ibhilidi. Futhi imiphumela ikhona: nge-150 m2 yamatayela we-Soltech, i-nursery emadolobheni aseStockholm ikhiqiza cishe i-48 kWh ngonyaka - ngaphezulu kokuphindwe kabili ukusetshenziswa kwamandla kwendlu yomndeni owodwa yakamuva.
ISoltech itholakala ngezinhlobo ezine: I-Sigma, yophahla olunamathayili, i-Alfa, yezinye izakhiwo, iTecho Solar, yophahla lukasimende (ikakhulukazi emazweni aseMedithera) kanye neSoltech Power, ehlanganisa amaphaneli we-photovoltaic ukukhiqiza ugesi. Uhlelo olwenziwe yinkampani encane lungafakwa kunoma yisiphi isakhiwo, noma ngabe livuliwe (ngokwesibonelo idamu lokubhukuda langaphandle) noma livaliwe.
Amandla alobu busha? Okokuqala, amathayili avumela ukushisa, ngenxa yelanga, noma ngabe isimo sezulu sigubuzele. Ngemuva kwalokho, ukonga isikhala esikhulu kutholakala. Uphahla lonke (noma izindonga, kuya ngesakhiwo) lungasetshenziswa ukugcina ukushisa okuvela elangeni. Akudingeki isentimitha lesikwele ukufaka iSolartech.
Ekugcineni, uhlelo oluhlongozwa yinkampani lunenzuzo yokugcina: leyo yokuba yobuhle. Futhi uma othile oseduze kwakho engazitholi lezi tile ngokuthanda kwabo, ungahlala unabo qhathanisa izikweletu zakho zamandla.
Amathebulethi ayi-15 kaThoth - uHermès Trismegistus (Umsindo)
The Meaning of Letting Go - I-Eckhart Tolle (Audio)
I-African Wisdom 2.0 - Imibono eyishumi yebhizinisi elinobuso bomuntu ngaphezulu